ओली भारतवि,रोधी होइन, भारतीय ह’स्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिवि,रुद्ध ल’ड्ने नेता हो सम्मान छ  ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कोरोनाको जो,खिम पहिलाभन्दा बढ्दै छ । बाढीपहिरोको मौसम थपियो । लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल फिर्ता ल्याउनु छ । सबै रा,जनीतिक दल र ती’न करोड नेपालीको एकता रा,ष्ट्रले खोजेको छ नक्सा अद्यावधिक गर्दाजस्तो । तर दु,र्भाग्य, यहीबेला सत्तारूढ नेकपा लाजमर्दो आन्तरिक द्व,न्द्वमा छ । र, केन्द्रमा छ– सत्ता । अझ भनौँ, नेकपाभित्रको मात्र होइन, मुलुककै तुलनात्मक योग्य र सक्षम व्यक्तिको ज,बर्जस्ती विकल्पको खो,जी । जनमतले भन्छ केपी शर्मा ओलीसहितको सहमतिमा कुनै नि,र्णय हुन सक्छ । तर, ओलीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल वा पहिला नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु देश र पार्टीको हितमा छैन ।
यसबीचमा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाललाई सम्झने संस्थागत प्रयाससमेत पार्टीले गरेको देखिएन । जब कि मदनको जबजका कारण युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता ढ,ल्दा नेपालमा आरम्भ भएको यथार्थ हो । तर, वि,वादको जरो को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति भन्ने भयो, जुन दुर्भाग्य हो । विभाजित कार्यकर्ता केही समयका लागि संयमित हुन सक्छन् तर नागरिकको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्छ पश्चिम बङ्गालमा जस्तो ।एउटा सकारात्मक पाटो देखियो । नेकपामा दोस्रो पुस्ताका नेता वा त्यसपछिका युवा नेताको स्वतन्त्र हैसियत देख्न सकिएको थिएन । उनीहरूमा जीवन देखिएको थिएन, अहिले देखिँदै छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा असार १९ मा भएको बैठक र त्यसै दिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको सत्याग्रह त्यसका उदाहरण हुन् । सत्याग्रहको रसायन भने साँघुरो देखियो । यो पुस्ताले अझै ह,स्तक्षेप गर्न नसकेको पक्ष छ– ७० वर्ष पुगेका, पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका सबैलाई विश्रामका लागि सामूहिक द,बाब दिने ।शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझीहरूले गलबन्दीचाहिँ पुरानै लगाउने मोहबाट मुक्त हुने हि,म्मत गर्नुपर्छ । यो गरेको देखिँदैन । यो समस्या नेपाली काँग्रेसमा झन् बढी छ । त्यहाँ युवाले क्षमताअनुसार नेतृत्व पाएका छैनन् । विश्वास राखौँ सत्ता र विपक्षका देशप्रति चिन्तित युवाको चिन्तन यसतर्फ हुनेछ । तर, अहिलेको मूल बहस घरेलु रा,जनीतिमा बाह्य चासो र ह,स्तक्षेपको हो । पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्कंदा र आन्तरिक एकता खण्डित हुँदा घरेलु मामिलामा बाह्य समुदाय कसरी प्रवेश गर्न खोज्छ भन्ने हो । विदेशी संस्थापन, एजेन्सी र तिनका घरेलु प्रतिनिधि कसरी प्रवेश गर्न खोज्छ भन्ने हो । विदेशी संस्थापन, एजेन्सी र तिनका घरेलु प्रतिनिधि कसरी अप्ठ्यारोमा खेल्न खोज्छन् भन्ने हो । केही उदाहरण हेरौँ ।
यो प्रचारमा दक्षिणका मिडिया एक छन् । उताका विदेश र रक्षा विश्लेषकले
Previous भुटानी रा’जा भन्छन म नेपालको प्रसूति गृहमा जन्मेको हुँ मेरो घनिष्ट सम्बन्ध छ,,हेर्नुहोस!
Next दःखद खबर,,,बाथरुम जाने क्र`ममा बे`होस भएर कुलमानका बुवाको मृ`त्यु!